Vivaldi 3.0 Inosvitsa Nyowani Yemukati Zvekuvhara | Linux Vakapindwa muropa
Vivaldi 3.0 inosvitsa nyowani yezvinyorwa blockers uye izvi zvimwe zvekuvandudza
Vivaldi 3.0 yemukati blocker
Apo aimbova CEO weOpera paakasiya kambani, vashoma vedu taigona kufungidzira kuti chirongwa chebrowser chaaizogadzira chaizofamba nekukurumidza. Pazera remakore mana chete, rave rave kufarira kwevashandisi vazhinji, kunyanya avo vari kutsvaga kumwe kusarudzika kana vanogadzira. Nhasi, Vivaldi Technologies akakanda Vivaldi 3.0, kuburitswa kutsva kukuru kwakaunza zvinyorwa zvinozivikanwa zvinopembedza shanduko yenhamba ye 2.11 kusvika ku3.0 yakaiswa mune iyi vhezheni.
Pamwe inozivikanwa zvikuru inozivikanwa inouya neVivaldi 3.0 ndeyekuti yaisanganisira nyowani yezvinyorwa blocker. Kufanana nemamwe mabhurawuza akaita seFirefox, iyo Vivaldi nyowani ichavhara matracker, anonyatso kuzivikanwa muChirungu seTrackers Kuti vaite izvi, ivo vakaisa iyo DuckDuckGo block runyorwa Radar TrackerNaizvozvo, mukuwedzera pakusateverwa nebhurawuza, ikozvino hatigone kuteverwa nemakambani echitatu-bato. Asi vateveri havazi ivo chete chinhu chinovharira.
Vivaldi 3.0 inosimbisa
Trackers blocker. Iyi vhezheni ichavhara trackers nekuda kwekubatana kwayo neDuckDuckGo.
Clock mubato remamiriro.
Spatian Navigation yakagamuchira shanduko huru: kushandisa Shift uye nekiyi dzekufambisa, izvozvi zvave kugona kuwana chero chinongedzo mune mashoma mashoma, ayo anokurumidza zvikuru.
Kunatsiridza kwePop-kunze, Vivaldi's Mufananidzo-mu-Mufananidzo. Iye zvino inogona kumiswa.
Multi-tasking muPanels, dashibhodhi iyo inogona kuwedzerwa mubarutivi rwepadivi uye inosanganisira maturusi akadai sekurodha pasi, zvido, nhoroondo, mapaneru ewebhu, mapaneru ewindows uye manotsi.
Kuvandudzwa kwetabhu kurongeka.
Zvishandiso senge screenshots izvozvi zviri kukurumidza kushanda nazvo.
Zvirinyore kufamba nenzira nyowani nhoroondo uye mapfupi ekugadzirisa uye gonzo zvinyowani.
Kugadziridzwa kwekuenderana pakati pemidziyo.
Kumwe kuvandudza kune iyo yekugadzirisa yeiyo mushandisi interface.
Kurumidza kuenda kumberi / kumashure kutsvaga kwekutsvaga.
Vivaldi 3.0 ikozvino iripo kune ese masisitimu akatsigirwa kubva pawebhusaiti munyori watinogona kuwana kubva kwaari Iyi link. Kune vashandisi varipo, iyo nyowani vhezheni ichave yatove yakamirira seyekuvandudza. Iyo Android vhezheni inowanikwawo, asi iine mashoma mashoma maficha pane ayo ataurwa muchinyorwa chino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vivaldi 3.0 inosvitsa nyowani yezvinyorwa blockers uye izvi zvimwe zvekuvandudza
Raspbian XP, nyowani yeWindows XP inonamira yako Raspberry Pi
Deepin Linux 20 Beta inowanikwa kurodha pasi